Moe Kai: ပခုံးဆစ်နာတဲ့ ခဲတဲ့ရောဂါ (Frozen Shoulder)
ဒီပုခုံးဆစ် ခဲတဲ့ ရောဂါဆိုတာ အသက် ၄၀ - ၇၀ ကြားရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
သုတေသန တွေမှ ဆိုထားတာကတော့ လူ ၅ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရပေမယ့် ဟိုမုန်း အပြောင်းအလဲ နဲ. သက်ဆိုင်ရမယ်လို. အဆိုတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ ရှိတဲ့သူတွေမှာ ၅ဆ ပိုအဖြစ်များတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ ဘယ် ညာ နှစ်ဘက်လုံး ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသုံးမပြုတဲ့ လက် ဖက်က ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ၅ယောက်မှာ ၁ယောက်က တခြားပုခုံးကိုပါ ဆက် ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို. ဆိုပါတယ်။
ရောဂါ ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရောဂါ အဆင့်က ၃ ဆင့် ခွဲတွေ.နို်င်ပြီး ဒါကို ဖြတ်သန်းဖို. ပျမ်းမျှ ၂ နှစ်လောက် ကြာပါတယ်။ ဆိုလုိုတာကတော့ ဘာမှ မကုရင်တောင် ဒီ ၂ - ၅နှစ် လောက်ကြာရင် ဒီခဲနေတဲ့ ပုခုံးဆစ်ဟာ သူ.ဟာသူ ပြန်ပျော်ပြီး ရောဂါ ပျောက်သွားပါလိမ်.မယ်။
အဆင့် ၃ ဆင့်ကို အတိုချုန်. ရှင်းပြပါမယ်။
ပထမ အဆင့်၊ စတင်ခဲလာခြင်း (၂လ - ၉လ)
ဒီအချိန်က ပုခုံးဆစ်၊ အင်္ဂလိပ်လို Gleno-humeral joint လို.ခေါ်တဲ့ အဆစ်နဲ.အဆစ်နားမှာရှိတဲ. အရွတ်တွေ စပြီး ရောင်ကိုင်းလာပါတယ်။ လူနာအနေနဲ. ဒီအချိန်မှာ ပုခုံးမှာ အရမ်းနာနို်င် ကိုက်ခဲနိုင် ပါတယ်။ ညဘက်မှာ ပိုဆိုးတတ်ပြီး အဲဒီ ပုခုံးကို ဖိအိပ်ရင် ပိုနာပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်၊ ခဲသွားတဲ့ အဆင့် (၄လ - ၁၂လ)
ဒီအချိန်မှာတော. ရောင်နေတဲ့ အဆစ်မှာ အနာရွတ်တွေ ဖြစ်လာပါပြီ။ လူနာအနေနဲ.တော့ ပုခုံး လှုပ်မရ ပဲ တောင့်တင်းနာကျင်မှုကြောင့် ပုံမှန် နေ.စဉ် လုပ်နေကျ အလုပ်များအတွက် ခက်ခဲတာတွေ တွေ.ရနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ အဝတ်အစား ဝတ်ခြင်း။ ခေါင်းလျှော် ခေါင်းဖီးခြင်း။ စားသောက်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းများ)
တတိယအဆင့်၊ ပြန်ပျော်လာတဲ့ အဆင့် (၅လ - ၁၂လ)
ဒီအချိန်မှာတော့ ခဲနေတာတွေ ပြန်ပျော်လာပါပြီ။ ရောင်တာတွေကျလို. အနာရွတ်တွေ စပျောက်လာတဲ့ အချိန်။ လူနာအနေနဲ.လဲ နာတာတွေ သက်သာလာသလို အဆစ်တွေ ပြန်ပြီး တဖြေးဖြေး လှုပ်ရှားလို. ရလာတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာ တယောက် ဒီခဲသွားတဲ့ ပုခုံးဆစ်ရောဂါ ကိုခံစားရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်တယောက် အနေနဲ. စမ်းကြည့်တာနဲ. Diagnose လုပ်လို.ရပါတယ်။ ဓါတ်မှန်တော့ တခြားရောဂါတွေ မဟုတ်တာ သေခြာအောင်လို. လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဆီးချိုရောဂါကို စစ်ဖို.လဲ မမေ့သင့်ပါဘူး။
ကုထုံးအနေနဲ.ကတော. အကိုက်အခဲ။ အနာ အရောင် သက်သာစေတဲ. Anti-inflammatory ဆိုတာတွေ စသောက်နို်င်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်တာက ဒီပခုံးကို လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်လုပ်ပေးပြီး ခဲသွားတဲ့ အဆင့်မရောက်အောင် ကာကွယ်ရပါမယ်။ တချို.က နာလွန်းတော့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဆရာဝန် နဲ.ပြပြီး အဆစ်ထဲ Steroid ဆေးထိုး ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် ရောင်နေတာကို ကျစေပြီး ထုံဆေးလဲ ပါတာကြောင့် အနာကိုလဲ သက်သာစေပါတယ်။ ထိုးနည်း ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမကတော့ Sub-acromial injection လို.ခေါ်တဲ. ပခုံးအောက်က နေရလေးထဲ လက်တန်း ထိုးပေးတာဖြစ်ပြီး။ ခုနောက်ပိုင်း ပိုသုံးလာတာကတော့ Ultrasound ဓါတ်မှန်နဲ. သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး Gleno-humeral ပုခုံး အဆစ်ထဲ ရောက်အောင်ထိုးရပါတယ်။ ထိုးပေးတဲ့ ဆေးကလဲ စတီးရိုက် (Steroid) တင်မကပဲ ၂၀cc လောက်ရှိတဲ့ ရေကိုပါထဲ့ ထိုးတာပါ။ Hydrodilation therapy လို.ခေါ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ထိရောက်မှု ရှိတယ်လို. သုသေသန အမြောက် အများမှာ ဆိုထားပါတယ်။ ဆေးထိုးလိုက်ရုံနဲ. မပြီးသေးပါဘူး။ နာတာ သက်သာသွားချိန်မှာ လူနာက လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ်ဖို. အလွန် အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။
တခြား ခွဲစိတ်ကုပညာနဲ. ကုတာတချို.လဲ ရှိပါတယ်။ ပထမနည်းက လူနာကို မေ့ဆေးပေးပြီး ဆရာဝန်ရဲ. အားနဲ. ပခုန်း ကို ရအောင် လှုပ်ရွှေ.ပေးတာပါ။ Manipulation under anasthesia လို.ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တနည်းကတော့ ပုခုန်းမှာ အပေါက်ကလေးဖေါက်ပြီး ကင်မရာပါတဲ့ ဂိုက်တန်လေးကို ထဲ့ပြီး အနာရွတ်တွေကို ရှင်းထုတ်ဖို. ကျိုးစားတာပါ။ Arthroscopic capsulotomy လို.ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီနည်းတွေကို သိပ် အားမပေးတော့ပါဘူး။
ပုခုန်းလေ့ကျင့်ခန်း တချို.ကို ဒီမှာ ဝေမျှပေးရင်း ဒီစာကို နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း လက်ကို အဝိုင်းပုံ အရှေ.အနောက် လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်။
နံရံကို မျက်နှာမူပြီးတော့ လက်ကို နံရံပေါ် မြင့်သထက် မြင့်အောင် သွားပေးပါ။
ဒီအတိုင်း နံရံနဲ. ဘေးတိုက် နေပြီး လက်ကို ဘေးကနေ မြင့်အောင်လဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဝါးရင်း တုတ်တချောင်း အကူအညီ ယူပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အရှေ.ကိုမြောက်၊ အနောက်ကို မြောက်၊ ဘေးကိုဆွဲ၊ အနောက်က ဆွဲမ။ ဒါတွေ လုပ်ခြင်းမအားဖြင့် တောင့်ပြီး လှုပ်လို.မရတဲ့ ပုခုံး ဆစ်တွေ ပြန်ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။